အဆိုပါ DV ထီ (program ကိုမတူကွဲပြားမှုလူဝင်မှုဗီဇာ) | USAHello | USAHello
Program ကိုမတူကွဲပြားခြင်းပြောင်းရွှေ့လာသောလူဗီဇာထီလည်း DV ဟုခေါ်သည်, သို့မဟုတ်ဗီဇာထီအစိမ်းရောင်ကဒ်ထီ. နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း, ၏ 1995 တစ်ဦး 2020, OF. THE. ဒါဟာခွင့်ပြု 50,000 ပရိုဂရမ်ကိုတဆင့်ဗီဇာ. တွင် 2021, သူတို့ကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မည် 55,000 ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ. ပြည်သူ့ကျပန်းရွေးချယ်ရေးကရွေးချယ်နေကြတယ် (အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်) အဆိုပါဗီဇာထီအတွက်. သင်တစ်ဦးဗီဇာအနိုင်ရလိုလျှင်, သငျသညျအသကျရှငျနိုငျသညျ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အလုပ်နှင့်လေ့လာမှု. ပြီးနောက်5အသက်အနှစ်, သငျသညျနိုင်ငံသားအဖြစ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်.
အဆိုပါ DV ထီအစီအစဉ်ကို 2021
အဆိုပါပြည်နယ်ဦးစီးဌာနများအတွက်မတူကွဲပြားမှုဗီဇာအစီအစဉ်ကိုကြေညာခဲ့သည် 2021. သူဟာလိမ့်မည်ပြောပါတယ် 55,000 မတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာ (DV) ရရှိနိုင်. အဆိုပါ DV အစီအစဉ်အတွက်မှတ်ပုံတင်မည်အခမဲ့. အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်မရွေးလျှောက်ထား (ရှေးခယျြ) သူတို့ကအရည်အချင်းပြည့်မီလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းရပါမည်.
ငါ DV ထီများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်မည်သို့?
မှတောင်းဆိုခြင်း2အောက်တိုဘာလ 2019 နှင့်5နိုဝင်ဘာလ 2019
လျှောက်ထားအီလက်ထရောနစ် DV-2021 အစီအစဉ်အတွက် posts များတင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည် dvlottery.state.gov မွန်းတည့်များအကြား, အရှေ့ပိုင်းအချိန် (အီးဒီတီ) (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်-4), ဗုဒ္ဓဟူးနေ့2အောက်တိုဘာလ 2019 နှင့်မွန်းတည်, အရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန် (IS) (ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်) -5), အင်္ဂါနေ့5နိုဝင်ဘာလ 2019.
ပဌမ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအဘို့ညွှန်ကြားချက်အရာရှိတဦးကမတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာအစီအစဉ်ကိုဖတ်ရှု 2021 (DV-2021).
ရိုက်ထည့်ဖို့မှတ်ပုံတင်ကာလ၏နောက်ဆုံးရက်သတ္တပတ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းမနေပါနဲ့, အဲဒီမှာဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုဖို့သူအများအပြားလူဖြစ်ကြလိမ့်မည်နှင့်နှောင့်နှေးစေမည်ဖြစ်သောကြောင့်. အဘယ်သူမျှမနှောင်းပိုင်းတွင် posts များသို့မဟုတ်စက္ကူ entries တွေကိုလက်ခံခဲ့လိမ့်မည်.
ပညတ္တိကျမ်းတစ်ဦးချင်းစီမှတ်ပုံတင်ကာလအတွင်းလူတစ်ဦးနှုန်းတစ်ဦးတည်းသာ entry ကိုခွင့်ပြု. အဆိုပါပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမျိုးစုံ entries တွေကို detect ပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးထက်ပို entry ကိုနှင့်အတူပြည်သူ့အရည်အချင်းပျက်ယွင်းလိမ့်မည်.
အဆိုပါ DV ထီများအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်ဘယ်သူက?
အထက်တန်းကျောင်းဒီပလိုမာနှင့်ညီမျှသည်သို့မဟုတ်နှစ်နှစ်သရုပ်ပြရမည်ဟုတစ်ဦးကလက်မှတ် အလုပ်အတွေ့အကြုံ လေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံအနည်းဆုံးနှစ်နှစ်လိုအပ်မယ့်အလုပ်အတွက်. သင့်ရဲ့အတှေ့အကွုံကနောက်ဆုံးငါးနှစ်အတွင်းဖြစ်သင့်.
သငျသညျဖြည့်စွက်ရမည်ဖြစ်သည် လြှောကျလှာ (DS-260) On-line ကို အဆိုပါကျောင်းအပ်ကာလအတွင်း2အောက်တိုဘာလမှ5နိုဝင်ဘာလ 2019. သင်သည်အခြားအချိန်များတွင်သင့်ရဲ့ကျောင်းအပ်မပို့နိုင်ပါ.
သင်တစ်ဦးလိုအပ်ပါလိမ့်မည် ခိုင်လုံသောနိုင်ငံကူးလက်မှတ် သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်, ကကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့်တစ်ဦးကင်းလွတ်ခွင့်များမဟုတ်လျှင်. THE. ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မလိုအပ်ပါဘူးလို့ပြော.
တစ်တိုင်းပြည်ကနေဖြစ်ရမည် အဘယ်သူမျှမ ဒါဟာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ်.
ယခင်နှစ်များတွင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖို့အများကြီးရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူကိုစေလွှတ်ပြီမဟုတ်ကြောင်းနိုင်ငံများမှလူပုဂ္ဂိုလ်များမှမတူကွဲပြားခြင်းဗီဇာခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်. လည်း, အဘယ်သူမျှမတိုင်းပြည်ထက်ပိုပြီးလက်ခံနိုင်သည် 7% တစ်နှစ်အတွက်ရရှိနိုင် DV ၏.
DV-2021 ဘို့, အောက်ပါနိုင်ငံများတွင်၏က အဘယ်သူမျှမ သူတို့ကလျှောက်ထားရန်အရည်အချင်းပြည့်မီ:
တရုတ်နိုင်ငံ (တိုက်ကြီးတွင်မွေးဖွား) *
* ဟောင်ကောင် SAR တှငျမှေးဖှားပုဂ္ဂိုလ်များ, မကာအို SAR နှင့်ထိုင်ဝမ်အရည်အချင်းပြည့်မီ.
ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင်, သင်သည်သင်၏အိမ်ထောင်ဖက်၏မွေးတိုင်းပြည်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်, သင်နှင့်သင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှစ်ဦးစလုံးသည်ရွေးချယ်ထားသော input ကိုတှငျဖျောပွထားကြသည်ပေးအပ်, ခွင့်ပြုရထိုက်ခွင့်နှင့်မတူကွဲပြားမှုဗီဇာများမှာ, နှင့်တစ်ပြိုင်နက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရိုက်ထည့်ပါ.
ဟုတ်ကဲ့ပါလျှင်, အဘယ်သူ၏က DV-2021 အစီအစဉ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလျှင်သင်တဦးတည်းမိဘ၏မွေးတိုင်းပြည်တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်. ဘာဆိုလိုတယ်ဆိုတာအပေါ်ပိုပြီးအသေးစိတျအဘို့, မြင် el sitio web oficial de la lotería de visas.
အများအပြားကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့အမေရိကန်ဗီဇာရဖို့ရန်သင့်အားပိုက်ဆံပေးလှည့်စားရန်ကြိုးစားနေလူတွေရှိပါတယ်. သူတို့ကိုမယုံကြည်ကြပါနဲ့. ဆပ်ဖို့မလိုအပ်. အဆိုပါပြည်နယ်ဦးစီးဌာနမှထိုတိရစ္ဆာန်တကောင်မျှမရှိဘဲသင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းရန်သင့်အားအကြံပေး “ဗီဇာအတိုင်ပင်ခံ”. ဥပမာအား, www.usgreencardoffice.com ကဲ့သို့သော website ကိုသငျသညျကိုအားသွင်း $ 98 သင်၏လျှောက်လွှာတင်သွင်းခြင်းအားဖြင့်. အခြားဝက်ဘ်ဆိုက်များသူတို့အရာရှိတဦးကအစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်များများမှာဟန်ဆောင်. သတိရ:
အဆိုပါ DV ထီဝင်အခမဲ့ဒါဟာင်
သင်ပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ဖတ်နိုင် ဗီဇာလိမ်လည်မှု မတူကွဲပြားမှု. ထိုအသင်သည်တတ်နိုင် တာဝန်ရှိသူတဦးကသတင်းအချက်အလက် နှင့် DV ထီဝင်.
တစ်ဦးထက်ပို application ကိုလုပ်မနေပါနဲ့. သင့်အနေဖြင့်ထီမှဖယ်ထုတ်လိုက်ပါမည်.
အားလုံးပုံစံ entries တွေကိုဖြည့်စွက်ရန်သေချာစေပါ.
website ကိုကြည့်ရှုပါ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသံရုံးသို့မဟုတ်ကောင်စစ်ဝန်ရုံး သင်၏နိုင်ငံအတွင်းနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ထီရှိစေခြင်းငှါလျှင်ထွက်ရှာရန်သင့်တိုင်းပြည်အတွက်.
သင်သည်များစွာသောဘာသာစကားများပြည်နယ်ဦးစီးဌာနများတွင်ဗီဇာညွှန်ကြားချက်ကိုဖတ်ခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်. (မှတ်ချက်: ဤရွေ့ကားညွှန်ကြားချက်များမှာ 2020. ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူအဆိုပါ update ကို 2021 ရရှိနိုင်သည့်အခါ).
နီပေါ / နီပေါ
ဘူဂေးရီးယား / ဘူဂေးရီးယား
ပေါ်တူဂီ / ပေါ်တူဂီ
ယူကရိန်း / ယူကရိဘာသာစကား
ပိုလနျ / ပိုလနျ
ပြင်သစ် / ပြင်သစ်
အီတလီ / Italiano
တူရကီ / တူရကီ
ရိုမေးနီးယား / ရိုမေးနီးယား
Arabic အဘိဓါန် / အာရဗေီ
အဘိဓါန် Uzbek- /(o'zbek အကောင့်)/
Armenian အဘိဓါန် / အာမေးနီးယား
US မှာခွင့်ပြုဒုက္ခသည်အရေအတွက်မှာ. THE. တွင် 2019
ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိသတင်းအချက်အလက်များကိုထံမှယူတတ်၏ ပြည်နယ်၏အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဦးစီးဌာန. ဒါဟာလမ်းညွှန်မှုများအတွက်ရည်ရွယ်သည်နှင့်အမျှမကြာခဏတတ်နိုင်သမျှမွမ်းမံ. မင်္ဂလာပါအမေရိကန်နိုင်ငံဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုမပေးပါဘူး, မဟုတ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပစ္စည်းများမဆိုဥပဒေရေးရာအကြံဉာဏ်ကိုအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံရဖို့ရည်ရွယ်သည်. သင်တစ်ဦးရှေ့နေသို့မဟုတ်တရားဝင်အကူအညီများကိုအခမဲ့သို့မဟုတ်တန်ဖိုးနည်းရှာနေနေတယ်ဆိုရင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုကူညီရှာဖွေနိုင်ပါတယ် အခမဲ့နှင့်အနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ.